अमेरिका बुलेट र ब्याटल « LiveMandu
२८ बैशाख २०७६, शनिबार १०:१०
सन् २०१८ को भ्यालेन्टाइन डे अर्थात फेब्रुअरी १४ मा पार्कल्याण्ड अमेरिकाको डग्लस हाईस्कुलमा गोली चल्दा १७ जनाको मृत्यु भयो । अमेरिकी इतिहासमा यो बहुतै दर्दनाक दिनमा रुपमा लिइएको छ । त्यसपछि अमेरिकामा युवाहरुले बन्दुक नियन्त्रण गर्न आन्दोलन निकै ब्यापक रुपमा चलाए, यो आन्दोलन बर्लिन, रोम, लण्डन र ईटालीमा समेत शुरु भयो । यस आन्दोलनलाई मार्च अफ आवर लाइभ्सका रुपमा अघि सारियो । बिधार्थीहरुले अन्य बिधार्थी र बिधालय क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि यस अभियानलाई बिश्वभर निरन्तरता दिए र स्मरण रहोस् कि यस्ता आक्रमणहरु बिधालय परिसरमा सबैभन्दा बढि भएको पाइन्छ ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा न्यूनतम बन्दुक किन्ने उमेर १८ भएकोमा अहिले बढाएर २१ वर्ष बनाइएको छ । बिभिन्न लेखक र बिचारकहरुका अनुसार अमेरिकाको बन्दुक निती बिवेकपूर्ण छैन र बन्दुकधारीको बन्दुकसगंको समबन्ध धार्मीक खालको रहेको बताइन्छ ।
आफ्नो मनोभाव र बिछिप्त अवस्थाका कारणले समग्र समाज र इतिहासलाई नै दाग लाग्ने गरि यस्ता घटनाहरु बढिरहेको देखिन्छ । यस्ता घटनाक्रमहरु २१सौं शताब्दीको दर्दनाक हरर स्टोरीका रुपमा विश्वभरि नै भयको छाप छाड्ने घटनाक्रमहरु हुन् । अमेरिकाको पूर्णत सभ्य र प्रभावकारी समाजमा बुलेट बिरुद्धको यो ब्याटल अहिले निकै चर्चामा छ । फेरि अमेरीकी समाज चलचित्र, गेम र फेयान्टासीबाट निकै प्रभावित भएको पाइन्छ तसर्थ अमेरिकामात्र नभई सम्पूर्ण पश्चिमा समाजमा नै यस्ता गेम खाले हत्याप्रकरण निकै चर्चामा छ । केहि महिनाअघिको न्यूजिल्याण्डको मस्जिदको हत्याक्रममा भएका हतियार र भिडियो श्रृखला पनि कुनै गेम भन्दा फरक थिएन । आखिर कहाँ जाँदैछ हाम्रो समाज ? अमेरिकी समाजशास्त्रीहरुको प्रश्नहरु निकै उठ्न थालेको छ ।
कतै बन्दुकले अमेरिकी समाजलाई टुक्राइरहेको त छैन ?
हफिगंटन पोष्ट बाट